निरज सर ! तपाई होइन, म कहाँ हराएँ ? - Naya Online
मङ्लबार, पुस २७, २०७८ (January 11th, 2022 at 1:59am ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
सन् २००६ को अन्त्यतिर मलेसियातिर हान्निएँ । मेरो दाजु राजेन्द्र खापुङ मलेसियामा कार्यरत रहेकोले गर्दा उनैको सल्लाहबमोजिम विद्यार्थी भिषामा मलेसिया पस्दै थिएँ ।
दाजु विद्यार्थी भिषाबारे जानकार भएको चाही एकपटक रेष्टुरेन्टमा सँगै काम गर्न पुगेका प्रविण दाहाल पनि त्यहाँ पढ्दै काम गर्दै गरेकाले रहेछन् । प्रविण दाहालसँग काठमाडौंमा केहीपटक भेट पनि भएको थियो । दाहालकै सल्लाहमुताविक म मलेसिया पुगेँ ।
कलेजका भिषा विभागमा हुनुहुन्थेछ –गुनासेगारण एल्लाप्पान । उहाँ विमानस्थलमा लिन आउनुभएको थियो । कलेजसम्म चाही प्रविण लिन आइपुगे ।
कलेजबाट प्रविणले दुईखालको रेल, बस चढाउँदै आम्पाङजया भन्ने ठाउँमा पु¥याए । जहाँ मेरो दाजु बस्दथे ।
म मलेसिया पुग्दा आफ्ना कपडाबाहेक केही आफैँले लेखेका पुस्तक बोकेर पुगेको थिएँ । कोशेलीको रूपमा मैले मेरो पुस्तक ‘आमुल परिवर्तनको बाटो’ प्रविणलाई दिएँ ।
दुईदिनपछि म कोताराया पुगेँ । जहाँ नेपाली बजार नै रहेछ । आइतबार त खुट्टा टेक्न नसकिने भिँड रहेछ । ति भिडहरू छिचोल्दै म नेपाल हाउस पुगेँ, जहाँ प्रविण बस्थे । प्रविणले मलाई नेपाल हाउसको माथ्लो तलामा लगे, त्यहाँ नेपाल हाउसको कार्यालय र कर्मचारी बस्न ठाउँ थियो ।
“सुर्केलीजीको साहित्यले मलाई खुब तान्यो, सुर्केलीमा साहित्यलेखनको भविष्य उज्ज्वल छ ।” कार्यालयमा बसिरहेका व्यक्तिले अचानक त्यसो भनेपछि म छक्क परेँ र कौतुहलता जाग्यो ।
“कसरी ?” मैले जिज्ञासा राखेँ ।
“मैले सुर्केलीलाई नजिकबाटै पढिसकेको छु ।” उक्त व्यक्ति थप बताएपछि लाग्यो –प्रविणले मेरो पुस्तक दिएछन् । साथै उनै व्यक्तिले बस्नको नेपाल हाउसमै बस्नको लागि आग्रह पनि गरेँ ।
विरानो देशमा पुगेको, त्यहीँमाथि दाईसँग पनि टाढा बस्न मन मानिहाल्ने गरेको थिएन र त्यसदिन विदा मागेर आम्पाङ पुगेँ ।
कलेज जानको लागि आम्पाङ पोइन्टदेखि कोतारायासम्म बसमा, त्यसपछि प्रविणसँग रेलमा चढेर सेतियाजया पुगिन्थ्यो । जाँदाआउँदा नेपाल हाउस छिरिन्थ्यो, त्यहिँ खाना खाइन्थ्यो । उही साहित्यप्रेमीसँग केहीबेर कुराकानी गरिन्थ्यो ।
मैले उहाँबारे बुझ्दै गएँ –उहाँ विराटनगरबासी निरज सापकोटा हुनुहुन्छ । चलचित्र सौभाग्य बनाउने माधव सापकोटाको छोरा हुनुहुन्छ । र, सहित्य लेख्नुहुन्छ ।
मलेसियाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा साहित्यकारहरूको संस्था बनेको र त्यसको विस्तारित भेला गर्ने सूचना पढ्न पाएँ । सुचनालाई पच्छयाउँदै कार्यक्रमस्थलमा पुगेँ । पुगेकै दिन मलाई सदस्यमा तानियो र संस्थाले प्रकाशन गर्ने पुस्तकको सम्पादन मण्डलभित्र राखियो ।
मैले कम्प्युटर किनेर साइनो रेष्टुरेन्टको छेउमा राखेँ र पत्रिका तथा अन्य डिजाइनको काम गर्न थालेँ । साथै, नेपाल सन्देश साप्ताहिकमा काम पनि गर्न थालेँ । छोटो समयमा मलेसियाका धेरै नेपालीसँग चिनजान गर्ने मौका पाएँ ।
यसबिचमा निरज सापकोटासँग यति गहिरो दोस्ती बढ्यो कि कम्प्युटर नै बोकेर नेपाल हाउस छिरे । उनी नेपाल हाउसका शेयरधनी र मुख्य प्रवन्धक पनि थिए । उनले रुचाएका व्यक्तिको त्यहाँ बोलबाला हुने नै भयो ।
म त्यहाँ सरेपछि साहित्य संस्था त्यहाँ स¥यो । अन्य संघसंस्थाका कार्यक्रम त्यहाँ सरे । रेष्टुरेन्टको माथिल्लो तल्ला सभासम्मेलनको लागि कार्यक्रम गर्ने थलो बन्यो । आइतबार त ११ वटा सम्म संघसंस्थाका बैठक भएको रेकर्ड हामीले राखेका थियौं ।
म नेपाल सन्देश साप्ताहिकमा अभिव्यक्ति नामको स्तम्भ लेख्थेँ । उक्त स्तम्भमा नेपालमै केहि गरिसकेका र मलेसियामा पनि प्रयास गरिरहेकाहरूको सङ्घर्षका कथा लेख्थेँ । निरज सापकोटाको पनि लेखेँ । उक्त स्तम्भले निरजलाई मलेसियाको बजारमा साहित्यिक व्यक्ति पनि रहेछन् भन्ने चिनाएको थियो ।
हामीले प्रवासी नेपाली साहित्य संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)मा रूपान्तरण गरेका थियौं । अनेसास बन्नुमा नेपालका लागि तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठले पनि सुझाव दिनुभएको थियो ।
अनेसासले प्रकाशन गरेको विम्ब साहित्यिक संगालो र विम्ब गजल सङ्ग्रहले मलेसियाको नेपालीमनहरू बेग्लै छाप छोड्न सफल भएको थियो । यसपछि अनेसासले मलेसियाव्यापी नेपाली कविता प्रतियोगिता गर्ने भयो । जसको संयोजक मलाई तोक्यो । प्रथम पुरस्कार ५ सय, दोश्रो ३ सय र तेश्रो २ सय रिंगेट पुरस्कार दिने घोषणा गरियो र कविता आव्हान गरियो । त्यससमयमा यतिका रकम जुटाउन निकै सकस पनि थियो । आइएमईका सुशान्त बगाले साहित्यिक मनका थिए, लेख्थे र हामीलाई सहयोग गर्थे । दोश्रो पुरस्कार सुशान्तमार्फत नै आइएमईले प्रायोजन ग¥यो । तेश्रो पुरस्कार धनबहादुर याक्खाले गर्ने भए ।
पहिलो पुरस्कारको प्रायोजक खोज्न निकै कोशिष ग¥यौं । सन् २००७ को दीपावलीमा कार्यक्रम गर्ने निधो गरिसकेका थियौं । कार्यक्रमको मिति नजिक आइसकेका थियो । म र अनेसासका इन्द्र नारथुङे एक हिसाबका ढुक्कका व्यक्ति पनि थियौं र जसरी भए पनि हुन्छ भनेर बसेका थियौं । तर निरज सापकोटा ढुक्क भएनन् ।
गोम्बाक र सुंगाई नदिको दोभान (उक्त दोभानलाई स्थानीय भाषामा क्वालालम्पुर भनिएको हो)मा साँझसम्म बसिएको थियो । म विन्दास थिएँ, सापकोटाजी चिन्तित थिए । त्यो पुरस्कारको रकम कहाँबाट ल्याउने ? के छ उपाय ? भनेर बाराम्बार प्रश्न तेस्र्याइरहन्थे । म भने भइहाल्छ नि भन्दै नदिको बेग सुनिरहन्थेँ । केहीक्षणपछि सापकोटाजीले कहाँबाट झार उखेलेर ल्याएर दुबोझैँ छुवाएर भने –सुर्केलीले जसरी व्यवस्था गर्छ गर्न सकेन भने नेपाल हाउसले गर्छ ।
हामीसँग प्रविण दाहाल पनि थिए । हामी सापकोटाजीको गतिविधि देखेर फिस्स हाँस्यौ । र, सापकोटाको आज्ञामुताविक उक्त बाचालाई आत्मसात गर्दै झारलाई नदिमा बगाइदियौं । अलिलि जोहो भएको पैसा मेरो साथमै थियो । म कोताराया नजिकैको सिटीवान प्लाजामा बस्थेँ । नजिकै भएपनि बिचमा खोला भएकोले एकान्त बाटो थियो । उक्त बाटोबाट जाँदै गर्दा दुई लुटेराको फन्दा परेर झण्डै लुटिएँ । मैले पनि जोहो गरिएको रिंगेट बचाउन सकिनसकी लडेँ । मेरो भाग्य भनौं, एउटा बाइक आयो, त्यसपछि लुटेरा भागे । यसअघि पनि म लुटेराको कब्जामा परेको थिएँ, मेरो दाईले नयाँ किनिदिएको मोटोरोलाको भिडियो खिच्न मिल्ने मोवाइल खोसेर लगेको थियो ।
अनेसासले ५ सय रिंगेट जुटायो, नेपाल हाउसले व्यवस्था गर्न परेन । तर कार्यक्रमको मञ्च सजावट, कुर्सीको जोहोमा निरज सापकोटा पागलझैँ लागिरहे । काठका टुक्राटाक्री भेला पारेर रोष्टम बनाए । माइडिन सुपरमार्केटबाट रंगिन कागज ल्याएर रोष्टममा टाँसे ।
हामीले निरज सापकोटालाई नै प्रमुख निर्णायक बनायौं । अनि अन्य निर्णायकहरूमा वियोगी काइँला र सपना बस्याललाई तोक्यौं । करिब ४० वटा कविता संकलन भएका थिए । हुलाकमा आउँथे कविता । नभए हामीले तोकेको रेष्टुरेन्टमा छोडिएका हुन्थे । ति कविताहरूबाट हामीले २५ कविता प्रतियोगिताको लागि छान्यौं । र, वाचनका लागि बोलायौं । कार्यवाहक राजदुत हरिकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता र रेष्टुरेन्टका सञ्चालक पञ्जावी मुलका मलेसियन दम्पती थिए । राजिव सिंह दम्पतीलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको फोटोमा माल्र्यापण गराएर कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रम देखेर राजिव सिंह दम्पती पनि चकित थिए ।
तस्बिरमा बायाँबाट क्रमशः निरज सापकोटा, पंक्तिकार, प्रमुख अतिथि हरिकुमार श्रेष्ठ, अनेसास अध्यक्ष जीवन देवान गाउँले, सचिव इन्द्र नारथुङे
हाम्रो कार्यक्रम देखेर नेपाली दुतावास पनि हर्षित थियो । संस्थालाई सहयोगको रूपमा केही रिंगिट पनि उपलब्ध गराएको थियो । उक्त कविता प्रतियोगिताको सन्दर्भ, कार्यक्रमलाई जोडेर समिक्षात्मक लेख निरज सापकोटाले लेखेका छन् र अनेसास स्मारिकमा उक्त लेख छापिएको छ ।
त्यो समय निरज सापकोटालाई हरेक क्षण म नै चाहिन्थ्यो । म त विद्यार्थी थिएँ, मेरो कुनै आम्दानीको श्रोत थिएन । त्यसैले निरजजीले मलाई नेपाल हाउसमै बास दिलाएका थिए । त्यहीँ खाना, त्यही बसाई भयो झण्डै ६ महिना । तर सिंह दम्पतीले थाहा नै पाएनन् । बेलाबेला केटाकेटी झैँ बाझ्थ्यौं । म निस्कन्थेँ, तर निरज अघि बाटो छेक्न आइहाल्थे ।
झण्डै डेढ वर्षको मेरो बसाईमा मैले केही कमाएको थिइनँ । जसोतसो खाइरहेको थिएँ, कलेजको ट्युसन फि चाही दाजुबाटै भराइरहेको थिएँ । दाजुले भेटमा भन्थ्यो –“आफ्नै खुट्टामा उभिन सिक ।” तर मेरा खुट्टा चाहिँ लर्वराइरहेको थिएँ ।
निरज सापकोटाले नेपाल हाउसमै कम्प्युटर कक्षाको लागि ठाउँ दिएर मलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजेका पनि थिए । दुई विद्यार्थी म सँग कम्प्युटर सिक्न आउँथे । तर त्यो पुरा भएन । नेपाल पृष्ठभूमि साप्ताहिकको लागि सुन्दर आले र सुनिल चालिसेले निकै जोड गरे र म त्यस पत्रिकासँग आवद्ध भएर काम गर्न थालेँ । नेपाल पृष्ठभूमिले बस्नको लागि राम्रो फ्ल्याटको जोहो गरिदिएको थियो र केही रकम तलब पनि दिएको थियो । जसले गर्दा म आफै ट्युसन फि तिर्न सक्ने भएँ ।
उता नेपाल हाउस धरासायी बनेको र कोतारायामा बन्द गरेर सबै कर्मचारीलाई माउन्ट केरास्थीत पञ्जावी रेष्टुरेन्ट लगिएको थियो । त्यसपछि निरज सापकोटासँगको भेटघाट कम हुन थाल्यो ।
यताउता गर्दागर्दै ३ वर्ष बितिसकेछ । म नेपाल फर्किए । बिचबिचमा भिजिट भिषामा जाने आउने गरेँ । निरज सरसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुन पाएन । एकपटक मलाई फोन गरेर क्रिकेट गेमको प्रचारको लागि फोटो सम्पादन गर्ने अह्राए । मैले सामान्य सम्पादन गरिदिएँ । उनी मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम अफिसियल पेज बनाएर मलेसियामा भइरहेकको एसीसी प्रिमियर लिग –२०१४को प्रचार गरिरहन्थे । मलाई खेलसम्बन्धि कुनै चासो नभएकोले बहस भने गर्दैनथ्यौं ।
सन् २०१२ मा हामी फेसबुकमा पनि जोडियौं । फेसबुकमा दुःखसुखका मात्रै कुराकानी हुन्थे । थोरै मजाकका कुरा, बाँकी जिन्दगीका कुरा हुन्थे । म्यासेन्जरमै कविता दिन्थे, त्यसलाई नेपाल पृष्ठभूमिमा छाप्थेँ ।
हामीले २०१६ सम्म कुराकानी गरेका रहेछौं । १७ मा मैले पठाएको रिप्लाई आएन । त्यसपछि त मैले नि बिर्सेछु ।
मलेसियामा जीवन देवान, दिलदुखी जन्तरे अझै छन् । जीवन देवानले त अरपे साहित्य भनेर झकझकाई रहनुहुन्छ । अरपे साहित्यलाई सप्ताहान्त फेसबुकमा पोष्ट गर्नुहुन्छ र अनिवार्य ट्याग चाही इन्द्र नारथुङे, निरज सापकोटा, सञ्जय राई छुच्चा, दिलिप राई सगर, दिलदुखी जन्तरे, वियोगी काइँला, रुद्र मिश्रलगायत धेरै मलेसियासँग जोडिएकालाई गर्नुहुन्छ । भ्याउनेले कमेन्ट गरिरहेका छन् । नभ्याउनेले लाइक रियाक्ट गरिरहेका छन् । तर निरज सापकोटाको कुनै प्रतिक्रिया आएको हुन्न । र, सबैलाई सबैको चासो पनि उति छैन ।
केही समयदेखि म विराटनगरमा छु । मेरो स्थायी ठेगाना सुनसरीदेखि नजिकै हो विराटनगर । तर केही दिनको अस्पताल बसाईबाहेक विराटनगरमा यस्तो लामो बसाई भएको थिएन । यसपाल दुईमहिनायता बस्दै आएको छु । यसो समयसमयमा विराटनगर हुने पुराना साथीभाईलाई सम्झन्छु ।
मलेसियामै सँगै पढेका भाई दिपक कटुवालले मेरो फेसबुकमा कमेन्ट गरेँ । मैले तत्काल उनलाई बोलाए । भाई त दमकमा व्यावसाय गर्दै हुनुहुँदो रहेछ । उनको दाई विराटनगरमै रहेछन् । अनि सोध्ने क्रममै निरज सापकोटाको हालखबर सोधेँ ।
“दाईलाई थाहा छैन ?” भाईको प्रश्न पो आयो ।
“के भाई ? मलाई त थाहा छैन नि ?” मैले सिधा उत्तर दिएँ ।
“निरज दाई त स्वर्गवास हुनुभएको निकै वर्ष पो भयो त ?”
यस कुराले म स्तब्ध भएँ । निरज सरको फेसबुकमा गएँ । सरर स्क्रोल गर्दै झरेँ । निरजका भाई अनुज (जससँग मलेसियामा राम्रो दोस्ती थियो मेरो)ले निरजको निधन डाक्टरको लापरवाहीले भएको भनेर न्यू सृष्टि दैनिकमा अङ्ग्रेजी लेख नै लेखेको रहेछन् । सन २०१८ मा भएको घटनाबारे म पुरा अनभिज्ञ भएर बसेको रहेछु । म पुरै नोष्टाल्जिक बनेर निरज सरलाई सम्झिरहेँ ।
प्रिय निरज सर ! म सँग अरु शब्द छैनन् । एकपटक बुकितविन्ताङमा हिडिरहँदा तपाई र म झगडाको शैलीमा जिस्कदै कोताराया आइरहेका थियौं । मैले भनेँ, निरज सर तपाई मर्नुस्, म तपाईलाई अमर बनाउँछु । तपाईले भन्नुभयो कसरी ? मैले भनेको थिएँ –तपाई मर्नुभयो भने म तपाईको स्मृतिग्रन्थ निकाल्ने छु र अमर बनाउनेछु । अनि तपाई मसँग नराम्ररी ठुस्किनुभएको थियो । त्यो एउटा जिस्क्याई थियो निरस सर । आज सुनेको अप्रत्यासित खबरले म बिल्कुल बेचैन भएको छु, तपाईकै गाउँमा । आज यिनै शब्दहरूको साथ म श्रद्धासुमन चढाउँछु ।
उही छोटो समयमा गहिरो नाता गाँसेको साथी/भाई देवेन्द्र ।
तस्बिरहरुः जीवन देवान गाउँले र निरज सापकोटाको फेसबुकबाट